नीति कार्यक्रमबाटै एमसीसी कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, कार्यक्रममै चलाखीपूर्ण बुँदा घुसाइयो एमसीसी । सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुबै मिलेपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई रोक्ने साहस कसको ? नीति तथा कार्यक्रमबाटै एमसीसी कार्यान्वयनमा आयो ।
नेकपाभित्र व्यापक बिबाद छ, चार महिनादेखि पार्टीभित्र ३ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरेर जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने सुझाव दियो तर एमसीसी अव औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जानेभयो । सतहमा देखिएका भीम रावल र नदेखिने प्रचण्डले एमसीसीलाई रोक्नसक्ने देखिदैन । झण्डै झण्डै ढलिसकेको ओली सरकारले एमसीसी यसै अधिवेशनमा पास गरेर आफ्नो हैसियत देखाउने भएको छ । ओलीलाई फाल्ने प्रचण्ड, माधव, नारायणकाजी, विष्णु पौडेल, झलनाथ खनाल, वामदेवको बाक्लो दाल खाने अभियान तुहिसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा भनिएको छ–लप्सीफेदी–रातामाटे र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । प्रशारण लाइन भनेको एमसीसी अन्तर्गतकै परियोजना हो । यसमा कुल ३१२ किलोमिटर प्रशारण लाइनका लागि एमसीसी मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त हुनेछ । नेपालले १३ करोड डलर खर्चिनेछ । एमसीसी अमेरिकाको इज्जतको सवाल बनेको छ । नेपालमा एमसीसीलाई भारतको भित्री समर्थन छ र भारत–अमेरिकालाई चिढाउन ओली, देउवा कित्ता तैयार छैनन् । अव हेर्नुछ, नेकपा भनेको ओली र देउवा भनेको कांग्रेस हो कि होइन ?